'यो त हदै भयो देउवाजी'
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिना नाघ्दासम्म मन्त्री छान्न नसकेको भन्दै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अलोचना गरेका छन् । कांग्रेस माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका देउवालाई आईतबार विहान भेट्दै सत्तासाझेदार दाहालले यस्तो रोष प्रकट गरेका हुन् । पेरिसडांडास्थित...
१८ बर्षदेखि लाउडाको पौने २ अर्ब बेरुजु
काठमाण्डौ । मुलुकको हवाई इतिहासमै लाउडा प्रकरणले लामो समयसम्म चर्चा पायो । नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालिन उच्च अधिकारीसहित पर्यटनमन्त्री समेत र प्रधानमन्त्री समेत मुछिएको यो प्रकरणले झन्डै २ महिना संसद अवरुद्ध पनि भयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको राजनीतिक इतिहासमै कालो धब्बा लगाउने यो प्रकरणले पर्यटनमन्त्री...
काठमाण्डौ । नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) को हकप्रद शेयर बिक्री प्रक्रियामा अनियमितता भएको रहस्य खुलेको छ । बैंकको हकप्रद शेयर बिक्री प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रमोदकुमार श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले नेपाल बंगलादेश बैंक र बैंकको हकप्रद सेयर बिक्री...
काठमाण्डौ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २४ हजार ऋण पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारका नाममा ६४ अर्ब २२ करोड ऋण थपिएको छ । अघिल्लो आव ०७२/७३ सम्म सरकारको कुल (वैदेशिक/आन्तरिक) ऋण ६ खर्ब २७ अर्ब ८० करोड थियो । यसमा ६४ अर्ब २२ करोड थपिएस“गै सरकारको कुल ऋण ६ खर्ब ९२ अर्ब दुई करोड पुगेको छ । यो...
काठमाण्डौ । आन्तरिक सुरक्षाका लागि निकै संवेदनशिल मानिएका मन्त्रालयसहित संवैधानिक आयोगमासमेत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था आइएनजिओ र दातृ निकायले ९० अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गरिरहेको पाईएको छ। सुरक्षा संवेदनशिलता ख्याल नगरी गृहसहित १८ वटा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायमा अन...
काठमाण्डौ । भन्नलाई स्टुडेन्ट लाइफ इज गोल्डेन लाइफ भनिन्छ। एसईई उत्तिर्ण गरिपछि धेरै विद्यार्थीको चाहना स्वतन्त्रतामा रमाउने हुन्छ। कक्षा ११ र १२ को अध्ययन समयलाई कलेज लाइफ भन्ने गरिन्छ। तर अब विद्यार्थीलाई स्वतन्त्रताका लागि सरकारले बन्देज लगाउने तयारी गरेको छ। हाल मन्त्रिपरिषदमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रचलित शिक्षा ऐनको...
काठमाण्डौ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान जुम्लाको मेडिकल कलेजका लागि जग्गा प्राप्तिको बहाना बनाएर उपकुलपति डा. राजेन्द्रराज वाग्ले असार दोस्रो साता काठमाडौं गए। अस्पताल निर्देशक धर्मराज गोसाईलाई साथमा लिएर उनी काठमडाौं तर्फ लागेको एक साता नवित्दै रजियट्रर विश्वराज काफ्ले पनि एकेडेमिक डिन प्राध्यापक डा. मोदनाथ मराठलाई लिएर...
मिलेमतोमा होटल एभरेस्टलाई रातो स्टिकर
काठमाण्डौ । पाँच तारे होटल एभरेस्टलाई मिलेमतोमा रातो स्टिकर दिइएको तथ्य फेला परेको छ। व्यवस्थापनले होटल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि सरकारी निकायसँग मिलेमतो गरी रातो स्टिकर टाँस्न लगाएको हो। होटल व्यवस्थापनले पर्यटन विभागका इन्जिनियरलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर होटल बन्द गर्नुपर्ने गरी रातो स्टिकर दिन लगाएको होटलमा लामो...
प्रेम गरेको भन्दै युवतीमाथि निर्घात कुटपिट(भिडियोसहित)
काठमाण्डौ । प्रेम सम्बन्धकै कारण रूपन्देहीको मर्चवारका २ युवायुवती निर्घात कुटिएका छन्। सम्मरीमाई गाउँपालिका ६ डिहुली गाउँका मीना यादव र दिनेश लोध निर्घात कुटिएका हुन्। मीना १८ र दिनेश २१ वर्षका हुन्। विवाहितले अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्ध राखेर इज्जत फालेको भन्दै मीनाको परिवारले घेरा हालेर उनीहरुलाई लठ्ठी र लात्तीले हिर्काएका...
मन्त्रिमण्डल तत्काल विस्तार नहुने
काठमाण्डौ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकपछि मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाई भइरहेको भन्दै चौतर्फि आलोचना खेपिरहेका देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक आगामी सोमबार आह्वान गरेका छन् । उद्दपि तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न...
जलविद्युत आयोजनाबाट साढे ५ करोड जरिवाना
काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २० जलविद्युत आयोजनालाई शर्तबमोजिम आफैंले कबोल गरेको बिजुली उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै जरिवाना गरेको छ । हालसम्म निजी क्षेत्रबाट ४ सय ४१ मेगावाट बराबरका ६० जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएकोमा यसरी एक तिहाई निजी जलविद्युत आयोजनाले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई प्राधिकरणले गम्भीर रुपमा...
नेपालमा यसकारण बढ्दैछ तापक्रम
काठमाण्डौ । नेपालको तापक्रम बार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । यसअघि सरकारले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालमा बार्षिक ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले मात्र तापक्रम बढिरहेको आँकडा प्रस्तुत गरेको थियो । विकसित मुलुकले उत्सर्जन गर्ने कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड, मिथेन, क्लोरोप्mलोरो...
काठमाण्डौ । सरकारी कर्मचारी र सेवा प्रदायकबीच ‘लेनदेन’ मिलाउन असारमा काटिएका १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको चेक आर्थिक बर्ष सकिदा पनि साटन बाँकी रहेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा कुल ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चेक काटिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले ७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँको मात्रै...
दरबार भत्काउन गिरोह सक्रिय : भत्काउनेलाई ५ देखि १५ वर्ष जेल
काठमाण्डौ । आफैंले बनाएको ऐनविपरीत सरकारले राणाकालीन दरबार भत्काउन थालेको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनविपरीत पुरातत्वव विभागको स्वीकृतिमा सहरी विकास मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको थापाथलीस्थित सिंह महल र बालुवाटारस्थित सीता महल भत्काउन थालेको हो । ०७२ सालको भूकम्पले यी सबैजसो राणाकालीन दरबारमा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।...
काठमाण्डौ । भारत र भुटानसँगको सीमाक्षेत्रमा चीनले सडक विस्तार सुरु गरेपछि पछिल्लो विवाद चर्किएको छ । चीन, भारत र भुटानको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा चीनले बनाइरहेको सडकले आफ्नो भूमि मिचिएको भुटानको दाबी छ । पछिल्लो अवस्था : दोकलाम क्षेत्रमा चीन र भारत दुवैका सेना तैनाथ छन् । अहिले उनीहरू आमने–सामनेको अवस्थामा छन् । उनीहरूको...